Ọtụtụ ụgbọ elu na -aga Bonaire si USA na Delta, American na United ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Caribbean » Ọtụtụ ụgbọ elu na -aga Bonaire si USA na Delta, American na United ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụlọ ọrụ nlegharị anya Bonaire (TCB) na -akpọsa usoro ụgbọ elu sitere na American Airlines, Delta Air Lines, na United Airlines maka ọnwa ndị na -abịanụ.
Ma Delta Air Lines na American ụgbọ elu na -ahụ ọnọdụ dị mma na ntinye akwụkwọ maka agwaetiti ahụ.
United Airlines ga -amaliteghachi ụgbọ elu ha na Bonaire site na Houston na Newark na Nọvemba.
Agwaetiti Dutch Caribbean nke Bonaire na -anabata nlọghachi nke ụgbọ elu ndị njem si US.
Site na ịmalitegharị ụgbọ elu na -aga nke ọma site na US na June gaa agwaetiti Bonaire nke Dutch Caribbean, Tourism Corporation Bonaire (TCB) na -ekwupụta usoro ụgbọ elu sitere na American Airlines, Delta Air Lines, na United Airlines maka ọnwa ndị na -abịanụ.
Dị ka akụkụ nke atụmatụ mgbake njem anyị, Ụlọ ọrụ ndị njem na Bonaire ga -aga n'ihu na mbọ ndị a iji nọgide na -ahụ mmụba nke ndị ọbịa n'àgwàetiti ahụ, yana akụ na ụba mpaghara.
ma Delta Air Lines, na ụgbọ elu ndị America na -ahụ ọnọdụ dị mma, yana ntinye akwụkwọ maka agwaetiti ahụ. Yabụ, nke a bụ nnukwu ohere ịbawanye ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na Bonaire.
Ugbu a site na Nọvemba 20, 2021; Delta nwere ụgbọ elu Satọde kwa izu nke a ga -esi Atlanta, Georgia, na ụgbọ elu kwa izu a ga -abawanye na ụgbọ elu izu abụọ na Wednesde na Satọde n'etiti Nọvemba 24, 2021 -December 15, 2021. Mgbe ahụ malite na Disemba 18, 2021 ruo Jenụwarị 4, 2022 a ga -enwe ụgbọ elu kwa ụbọchị ewezuga Tuesday. Site na Jenụwarị 5, 2022 ruo Eprel 9, 2022 enwere ụgbọ elu Mọnde, Wenezde, Fraịde na Satọde.
Usoro ụgbọ elu American ụgbọ elu ugbu a site na Nọvemba 6, 2021 bụ ụgbọ elu abụọ kwa izu na Wenezde na Satọde si Miami, Florida. Malite na Nọvemba, 2021 ruo Jenụwarị 3, 2022, a ga -atụkwasị ụgbọ elu Mọnde na njem ahụ. Ọzọkwa, a ga -enwe ụgbọ elu kwa ụbọchị na Bonaire n'oge ezumike, site na Disemba 16, 2021 ruo Jenụwarị 3, 2022.
Na Nọvemba 6, 2021 United Airlines na -amaliteghachi ụgbọ elu ya na Houston, Texas na ụgbọ elu kwa izu na -aga Bonaire na Satọde yana ụgbọ elu nloghachi na Sọnde, yana ụgbọ elu Satọde kwa izu site na Newark, New Jersey.
Jazeera Airways etinyela aka na ụgbọ elu A28neo 320 ọhụrụ
Nwunye obi ụtọ: Australia bụ mmanya kacha ọhụrụ n'ụwa…